रोनाल्डो किन रियल मड्रिड फर्किदै छन् ? - नेपाल समय
रोनाल्डो किन रियल मड्रिड फर्किदै छन् ?
एजेन्सी- पोर्चुगिज सुपर स्टार खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्पेन फर्किने भएका छन् । यसै सिजन रियल मड्रिडबाट इटालियन सिरी ए लिग क्लब युभेन्टस पुगेका उनी स्पेन फर्किन लागेका हुन् ।
उनी स्पेन मात्र नभई आइतबार आफ्नो पुर्व क्लब रियल मड्रिडको घरेलु मैदानमा हुनेछन् । तर, उनी रियल मड्रिडको टिममा पुनः फर्केका भने हैनन् । उनी कोपा लिबर्टाडोर्सको दोस्रो चरणको खेल हेर्न रियल जान लागेका हुन् ।
उनी यस सिजन रियल छोडेपछि रियल फर्केका थिएनन् । उनी रियल छोडेपछि पहिलो पटक रियलको मैदानमा देखिदै छन् । स्पेनिस मिडियाका अनुसार लियोनल मेस्सी पनि रिभर प्लेट र बोका जुनियर्सबीचको फाइनल खेल हेर्न तयार रहेका छन् ।
र रियलका अध्यक्ष फ्लोरेन्टिनो पेरेज पनि फुटबल दुनियाँका महानहस्तीलाई स्वागत गर्न तयार रहेको बताएको छ । मार्काका अनुसार मेस्सीले आइतबार इस्पान्योलसँग खेलि सकेपछि क्याम्प नाँउमा जाने स्विकार गरेका छन् ।
मार्का कै अनुसार स्पेन पुगिसके पछि रोनाल्डो मड्रिडमा रहने छन् । तर, शुक्रबार सिरी ए लिगमा इन्टर मिलानसँगको भिडन्त पछि उनी मड्रिड जाने बताइएको छ ।
आरिफ र दिलिपको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा पुलिस वि...
एसीसी यु-१९ : नेपालको पहिलो खेल म्यानमारसँग
पल्सर स्पोर्टस् अवार्ड असार १७ गते
भारीको ह्याट्रिकमा आर्मीको लगातार दोस्रो जि...